बलात्कारीले छोरी जलाए, बुबा न्याय माग्न सक्दैनन् ! – Korea Pati
February 22, 2019 LeaveaComment on बलात्कारीले छोरी जलाए, बुबा न्याय माग्न सक्दैनन् !
हरिहरपुर (धनुषा) । उनी बोल्न सक्तैनन् । रुनलाई उनको आशु निखि्रसकेको छ । उनी निरन्तर एकै ठाउँमा बसेर टोलाइरहन्छन् ।
बलात्कारपछि ज्यूँदै जलाएकी छोरी दितिया (रेशमा) का पिता देवनारायण रसाइलीको दिन एकोहोरो टोलाएरै बितिरहेको छ । उनी पहिल्यैबाट बोलीबिहीन थिए । अहिले त अरुको बोली बुझ्ने क्षमता पनि हराएको छ ।
गत बिहीबार बलात्कारपछि जलाएर हत्या गरिएकी ११ वर्षकी रेशमा देवनारायण रसाइलीकी एक्ली सन्तान थिइन् । त्यो घटनापछि पुरै हरिहरपुर स्तब्ध छ । त्यो अपराध गरेका निरज जर्घामगर पक्राउ परेपनि हरिहरपुर स्तब्ध र त्रसित छ ।
सबैकी प्यारी रेशमा
गाउँकै विद्यालयमा कक्षा २ मा पुगेकी चञ्चल रेशमा हंसमुख स्वभावका कारण गाउँमा सबैको प्यारी थिइन् । उनी पढाईमा पनि एकदमै राम्रो रहेको माइलो बुवा पदमचन्द्र रसाईली बताउँछन् ।
कान्छी काकी मीरा रसाइलीका अनुसार, उनी आफ्ना बाबालाई असाध्यै माया गर्थिन् । ‘गीत सुन्न र नाच्न भनेपछि हुरुक्क हुन्थिन्’, काकी मीरा भन्छिन्, ‘गाउँमा बिहेबटुला हुँदा खुब नाच्थिन् ।’
अपराधको शिकार भएको दिन पनि रेशमा गाउँकै इन्द्र बुर्जा मगरको छोरीको विवाहमा बजिरहेको गीतमा रमाइरहेकी थिइन् । उनका बाबा र काकाहरु भन्दा अगाडि उनी पुगेकी थिइन् । संगै बिहेभोज खाएर अविभावकहरु घर फर्के, उनी नाच्न त्यही बसिन् । भोलि बिहान उनको जलेको शव घर नजिकैको उखुबारीमा फेला परेको थियो ।
रेशमा तीन बर्षकी हुँदा उनकी आमाले घर छोडिन् । कहाँ गइन्, कसैलाई थाह छैन । छोरीलाई बाबाले नै पाले । त्यसमा काकाकाकीहरुको ठुलो भरथेग रहृयो ।
रेशमा पनि आवाजविहीन थिइन् । रेशमाकी आमा देवनारायणका जेठा दाजु फटिकलाल पनि बोल्न सक्दैनथे ।
चार दाजुभाइमध्ये साइला देवनारायण खेतीपाती गर्थे ।
विश्वकर्मा परिवारको थोरै खेतीपाती छ तर, सिंचाईको व्यवस्था नहुँदा बर्षे झरीको भरमा छन् । यताउता काम गरेर खाद्यान्न जुटाउनुपर्ने मौसममा अपराधको शिकार बनेर बस्नुपर्दा कम्तिमा आगामी दिन असहज बनेको दाजु पदमचन्द्र रसाईलीले बताए । ‘अपराधीलाई सरकारले कडा कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘भाइलाई पनि सरकार, गैर-सरकारी संस्था वा व्यक्तिहरुले केही आर्थिक सहयोग गर्नुपर्‍यो ।’
मार्सी चामलको गज्जब ब्रान्डिङ, पसल-पसलमा खोजी
मुस्लिम आयोगको अध्यक्षमा प्रस्तावित समिम अन्सारीका दुइटा जन्ममिति, प्रतिलिपि र ढड्‍डाको विवरण फरक
March 2, 2021 गुरुदत्त न्यौपाने
होम क्वारेन्टाइनमा बस्दा पालना गर्नुपर्ने १५ नियम